दरबार हत्याकाण्ड नभएको भए… ~ FMS News Info
दरबार हत्याकाण्ड नभएको भए…
तीक्ष्ण बुद्धिका धनी युवराज दीपेन्द्र मुलुकमा शाहवंशीय पहिलो विद्यावारिधि (डा.) पदवीले सुसज्जित हुन करिब ६ महिना मात्रै बाँकी थियो, बीचैमा संसारभर सनसनी फैलिने गरी नेपालमा दरबार हत्याकाण्ड भयो । युवराजले पाउने डा.पदवीलाई कुन स्थानमा राख्ने भनेर पंक्तिकार पनि घोत्लिएको थियो । डा.श्री ५ युवराजधिराज दीपेन्द्र भन्ने कि श्री ५ युवराजधिराज डा.दीपेन्द्र भन्ने कि, श्री ५ डा.युवराजधिराज दीपेन्द्र भन्ने वा श्री ५ युवराजधिराज दीपेन्द्र वीरविक्रम शाहदेव (डा.) भन्ने अनेक विकल्प थिए ।
चारवटा विकल्प महाराजधिराज (वीरेन्द्र) लाई नजर लगाउन ठीक पारिएको थियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत नै भूगोल विषयमा विद्यावारिधिको अध्ययनको रफ्तार जारी थियो । युवराज दीपेन्द्रको विद्यावारिधिका लागि शोधनिर्देशनमा खटिनुभएका प्राडा बालकुमार केसीको नेतृत्वमा टिम नै खडा थियो । प्राडा. मंगलसिद्धि मानन्धर, प्रा.नन्दगोपाल रञ्जितलगायतका गुरुहरुबाट युवराज दीपेन्द्रको विद्यावारिधि पढाई चालू थियो । उहाँहरु दरबारमै पढाउनुहुन्थ्यो ।
युवराजको पढाई, जाँगर, गहिरो, जिज्ञासा, भित्री पिँधसम्म पुगेर उत्तर खोज्ने बानी, विलक्षणताप्रति सारा गुरु नतमस्तक बन्नुहुन्थ्यो । राजाको छोरा भएर मात्र होइन व्यक्तिगत रुपमा तीक्ष्ण प्रतिभाका धनी भएकैले परीक्षामा हरेकपटक टपर हुने दीपेन्द्रको विशेषता थियो । बुढानिलकन्ठ स्कुलबाट एसएलसी उत्तीर्ण दीपेन्द्रको उच्च शिक्षा बेलायतको इटन कलेजमा भए पनि स्नातक र स्नातकोत्तर तहहरु भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत नै भएको थियो ।
इटन कलेजबाट फर्किनुभएका दीपेन्द्रको स्नातक तहको पढाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत गर्ने दरबारकाृ निधोअनुसार स्नातक कक्षामा भर्नाका लागि फोटोसहितको फारम लिएर पंक्तिकार त्रिचन्द्र कलेज पुगेको क्षण ताजा छ । त्यहाँ पुग्दा त्यतिखेर भर्नाकै लागि लामबद्ध विद्यार्थीले फर्ममा टाँसिएको युवराज दीपेन्द्रको फोटो देख्नासाथ बाटो छोड्दै अगाडि पठाएका थिए ।
उपस्थित विद्यार्थीहरुले अभिभावक कोलममा महाराजधिराजको दरखास्त कस्तो होला भनेर हेर्न उत्सुक भएर पंक्तिकारलाई विस्तारै अनुरो गरेको पनि आजैजस्तो लाग्छ । देखाउन नहुने कुरै थिएन । देखाएँ । तर अभिभावक कोलममा भने राजाको नाम होइन तत्कालीन संवाद सचिव धनमणि आचार्यको नाम र दस्तखत थियो ।
संवाद सचिवलाई राजाबाट फारममा दस्तखत गर्ने अख्तियारी दिइएअनुसार गर्नुभएको भन्ने सबैले बुझे । फाराममा आम सर्वसाधारणको जस्तै दीपेन्द्रको पासपोर्ट साइजको फोटो टाँसेको देखेपछि सबै ट्वाल्ल परेर हेरेको हेर्‍यै भए । पंक्तिकार दौरा सुरुवालमै थियो । त्यत्रो लाममा बसेका विद्यार्थी भाइबहिनीले बाटो छोड्दै अगाडि पठाएर सम्मान गरेको भएपनि एक्लो अगाडि पंक्तिमा पुग्दा कस्तो अनुभूति भयो ।
तर के गर्नु त्यतिखेरको त्यस्तै चलन । भर्नाका लागि विद्यार्थी अध्यक्षले दस्तखत गर्नुपर्ने चलन थियो । त्यसबेलाका अध्यक्ष शंकर पोखरेलले फर्म देख्नासाथ सिफारिस गरिदिनुभयो । आवश्यक तस्तुर तिरेर युवराज दीपेन्द्रलाई स्नातक तहमा भर्ना गर्ने कार्य सम्पन्न भयो । परीक्षामा युवराज दीपेन्द्र टपर हुनुभयो ।
त्रिचन्द्र कलेजको प्रागणमै आयोजित विशेष समारोहमा प्रमुख अतिथि तत्कालीन श्री ५ वीरेन्द्र वीरविक्रम शाहदेवबाट पुत्र तत्कालीन श्री ५ युवराजधिराज दीपेन्द्रलाई पेडलसहित पुरस्कृत गरिँदाको क्षण पनि पंक्तिकारको मानसपटलमा घुमिरहेको छ । त्यस समयमा वर्तमान उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंह पनि सो विशेष समारोहमा सहभागीका रुपमा दर्शकदीर्घामा बस्नुभएको थियो ।
स्नातक टपर भएपछि बुबाज्यु महाराजधिराजबाट मेडलसहित सम्मानित युवराज दीपेन्द्रको सफलताकै खुसियालीमा दरबारमा तत्कालीन श्री ५ बडामहारानी ऐश्वर्य राज्यलक्ष्मी देवी शाहबाट विशेष जलपान समारोहको आयोजना भएको थियो । सहभागीलाई बडामहारानीबाट प्लेटमा फरफूल सर्भ भएको दुर्लभ दृश्य देखिएको थियो ।
गत आइतबारको बन्दका क्रममा प्रहरीले नियन्त्रणमा दिएका संघीय समाजवादी फोरमका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ तत्कालीन मन्त्रीको हैसियतमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो । समयले कहाँको कहाँ पु¥याउदो रहेछ । अध्ययनका क्षेत्रमा गहिरो अभिरुची, एकाग्रता, बिहंगम ज्ञान, स्मरण शक्तिलगायत हरेक तत्व विद्यमान रहेका युवराज दीपेन्द्रको भूगोल विषयक विद्यावारिधिको भाइभा मात्र बाँकी थियो ।
२०५८ को मंसिर महिनासम्ममा युवराज दीपेन्द्रको पीएचडी डाक्टर हुने तय थियो । तर विडम्बना, जेठ १९ गतेको भयानक शाही हत्याकाण्डले ती सबै योजना पानीमा मिलाइदियो ।